अत्याधिक मत पाउदा पनि किन दिए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारबाट राजिनामा?पढ्नुहोस::Nepal's Online News Portal
अत्याधिक मत पाउदा पनि किन दिए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारबाट राजिनामा?पढ्नुहोस
शुक्र, जेष्ठ १०, २०७६
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका छन् । भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा पार्टीले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेपछि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न मोदीले सरकारबाट राजिनामा दिएका हुन् । कुल ५४२ सिट क्षेत्रमा भएको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ३०३ सिट जितेको छ । यो नतिजासँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरि पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आउँदो साता उनको शपथ ग्रहण कार्यक्रम छ । पुनः प्रधानमन्त्री बन्न उनले शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । राष्ट्रपति कोविन्दले मोदीको राजीनामा स्वीकृत गरेका भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
केही दिनपछि मोदीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । नयाँ सरकार नबनेसम्म मोदी नेतृत्वको सरकारले ’कामचलाउ सरकार’का रुपमा काम गर्नेछ । शपथ अगाडि मोदी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वाराणासी जाने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । त्यस्तै उनी आफ्नी आमालाई भेट्न जाने पनि बताइएको छ ।
पाँच वर्षअघि भाजपाले २ सय ८२ सिट जितेको थियो । यसपालि भाजपाको मत बढेसँगै उसको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सिट पनि पहिलाभन्दा बढेको छ । पाँच वर्षअघि एनडिएले ३ सय ३६ सिट पाएको थियो । यसपालि १४ सिट बढाएर ३ सय ५० र्पुयाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कंग्रेसले पनि पहिलाभन्दा केही सिट बढाएको छ । पाँच वर्षअघि ४४ सिटमा खुम्चिएको कंग्रेस यसपालि छ सिट बढाएर ५२ र्पुयाएको छ भने उसको गठबन्धन युपिएले ८५ सिट जितेको छ । सन् २०१४ मा युपिए गठबन्धनको ६० सिटमात्र थियो ।
लोकसभामा अरू क्षेत्रीय दल र साना पार्टीले १०७ सिटमा जित हात पारेका छन् ।
प्रचण्डले खुलेर भने एकताबाट पछि हट्नु नै दुर्भाग्य हो
चितवन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता ढिला भए पनि सफलताका साथ सम्पन्न भएको बतापका छन्। सोमबार नेकपा चितवनको प्रथम बैठक तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले...
प्रदेश सरकारले ल्यायो खुसीको खबर ! सहिद परिवारलाई सरकारको भैंसी उपहार
९ असार, सप्तरी । प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारलाई लेनो भैंसी वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएलगतै सहिद परिवारका एक जनालाई रोजगारी र भैंसी बितरण गर्ने घोषणा गरिएको...
‘ठोकुवा गर्छु, २ वर्ष अगाडि अधिवेशन हुँदैन’ भन्ने पार्टी सभापति देउवालाई डा. शेखर कोइरालाको यस्तो झटारो !
८ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको बहस चर्किन थालेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूहले फागुनमा महाधिवेशन नगर्ने बाहना बनाइरहेको भन्दै उनी इतरको समूह आक्रोशित छ । केन्द्रीय...
केपी शर्मा ओलीको दिनगन्ती सुरु भएको सांसद यादवको दाबी
काठमाडौं, ७ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवम् सांसद राजकिशोर यादवले एक दुई जना सांसदले भाङ खाएर बोलेको जस्तो लाग्न थालेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण हुने...
आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै, कसरी हेर्न सकिन्छ त सकिन्छ ?